Thermoplastic Road Kumaka Machine Vagadziri | China Thermoplastic Road Yekumaka Machine Fekitori & Vatengesi
Mugwagwa wekumaka muchina weThermoplastic Ine Extruder
Isu tiri China 's hombe nyanzvi yekugadzira uye fekitori yemumugwagwa yekumaka muchina we thermoplastic ine extruder. Icho Chinoshanda uye chakasiyana-siyana michina, ine yakakwira nhanho yekushandisa, yakakwira chengetedzo coefficient, inogona kubatsira kudzikisa kusimba kwevashandi, kugadzirisa kugona kwekuvaka.
LXD860 Ruoko Push Thermoplastic Road Chichatara Machine
Isu tiri China 's hombe nyanzvi yekugadzira ruoko kusunda thermoplastic mugwagwa wekumaka michina. Iyo thermoplastic mugwagwa wekumaka muchina ndiyo yakakosha michina inoshandiswa mukati meplmoplasticroadmarking yekuvaka, inoda kushanda pamwe chete neye thermoplastic preheater.
LXD860 Yega-Inofambiswa Thermoplastic Road Yekumaka Machine
Isu tiri China 's hombe nyanzvi inogadzira yemain-propelled thermoplastic mugwagwa wekumaka michina. Yekumaka shangu yemuchina uyu inogadzirwa neakakwira-chaiyo kukanda simbi, iyo inogona kuita mitsetse kurongeka, yunifomu ukobvu uye yakawedzera kunaka. Banga rakateyiwa rekumaka shangu rinogona kuiswa kune akasiyana marudzi emigwagwa.
LXD168 Kutyaira Mhando Multi-inoshanda Thermoplastic (convex) Mugwagwa wekumaka Machine
Isu tiri China's hombe nyanzvi yekugadzira uye fekitori yekutyaira mhando multi-inoshanda thermoplastic (convex) yekumaka mumugwagwa michina. Icho Chinoshanda uye chakasiyana-siyana michina, ine yakakwira nhanho yekushandisa, yakakwira chengetedzo coefficient, inogona kubatsira kudzikisa kusimba kwevashandi, kugadzirisa kugona kwekuvaka.
LXD-618 Kutyaira Rudzi Thermoplastic (convex) Mugwagwa wekumaka Machine
Isu tiri China's hombe nyanzvi yekugadzira uye fekitori yekutyaira mhando thermoplastic (convex) yemigwagwa yekumaka michina. Icho Chinoshanda uye chakasiyana-siyana michina, ine yakakwira nhanho yekushandisa, yakakwira chengetedzo coefficient, inogona kubatsira kudzikisa kusimba kwevashandi, kugadzirisa kugona kwekuvaka.
LXD860 Kutasva Pane Rudzi Thermoplastic Road Yekumaka Machine
Isu tiri nyanzvi huru yeChina yekukwira-pane mhando thermoplastic mugwagwa wekumaka michina. Iyo tangi tangi ine yakapetwa kaviri simbi isina simbi, iyo inogona kuramba ichidziya uye inodzivirira pakupisa, inogona kubatsira kuchengetedza simba uye kudzivirira fomu scalding. Muchina une mukana wepamusoro kunyatsoshanda, mhando yepamusoro, nyore kushanda, uye inokodzera kugadziriswa.